Izimbadada: Ukunethezeka kwezinkanyezi ezinhlanu kuphela emhlabeni kufaka nezindawo zokungcebeleka
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Amahhotela nezindawo zokungcebeleka » Izimbadada: Ukunethezeka kwezinkanyezi ezinhlanu kuphela emhlabeni kufaka nezindawo zokungcebeleka
Izindaba zase-Antigua neBarbuda • Izindaba zeBahamas Breaking • Izindaba zeBarbados Breaking • Izindaba Ezintsha • Izindaba zeCuracao Breaking • Izindaba zeGrenada Breaking • Industry Hospitality Industry • Amahhotela nezindawo zokungcebeleka • Izindaba zaseJamaica • Izindaba Zokunethezeka • Izindaba • Izindaba zaseSanta Lucia • Ezokuvakasha • Iziphesheli Zokuvakasha | Izeluleko Zokuhamba • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
Ama-Sandals Resorts kanye namabhishi afaka iphakethe lokunethezeka lezinkanyezi ezi-5 eliphelele kunazo zonke lapho izivakashi zingajabulela khona amabhishi amahle anesihlabathi esimhlophe, indawo yokudlela yeGlobal Gourmet ™, indawo yokuhlala enhle, utshwala obungenamkhawulo be-premium, imidlalo ethokozisayo yamanzi, nokuningi.
Lapho amaSandals Resorts ethi konke kuhlanganisiwe, kusho konke okubandakanya ngayo yonke indlela ongayicabanga nangendlela yezinkanyezi ezi-5.
Azikho izinkokhelo ezifihliwe noma okumangazayo, futhi okuhlangenwe nakho kwezivakashi kuhle kakhulu futhi kufinyelela ngaphezu kwalokho obekulindelwe.
Kusukela ngomzuzu lapho isivakashi sisuka endizeni, konke kuyanakekelwa kusuka ekudlulisweni kwesikhumulo sezindiza kuya kumathiphu - kusukela ekuqaleni kweholide kuze kube yilapho izivakashi zigibela indiza zibuyela ekhaya.
Iqiniso ngukuthi okunye okubizwa ngokuthi yi-all-inclusives kuyangezwa ezinkokhisweni - njengezintela zikahulumeni, ukudluliswa kwezikhumulo zezindiza, iziphuzo zotshwala bama-premium, imisebenzi eyenziwe ngcono, ukudla okukhethekile, kanye nokuthishwa. Uma ukhuluma ngokuncipha, nansi ithiphu. Lokhu akusoze kwenzeka kwaSandals, ngoba konke kufakiwe ngokuphelele, futhi akukho zinkokhelo ezifihliwe futhi akukho okumangazayo, ngaphandle kwazo zonke izinto ezimangazayo abazenzayo ezibandakanya - njengokunethezeka kweqiniso kwezinkanyezi ezi-5.
Izimbadada ezomhlaba kuphela Ukunethezeka kwezinkanyezi ezingu-5 kufaka phakathi indawo yokuvakasha lapho kuhlala kufaka konke ngaso sonke isikhathi. Izimbadada zinikeza izivakashi ukufakwa kwekhwalithi ngaphezulu kunezinye izindawo zokungcebeleka emhlabeni. Isibonelo, izimbadada zifaka izinketho ezibanzi kakhulu kwezemidlalo yamanzi - ngisho nezimoto - konke kufakiwe, kufaka phakathi imiyalo. Ama-Sandals kuphela afaka phakathi i-scuba diving yansuku zonke kanye nama-scuba gear professional, ama-guides professional, izikebhe ze-Newton dive, nezindawo ezihamba phambili ze-Caribbean.
Emhlabeni, amaSandals afaka imidlalo ebanzi kakhulu njengegalufu enezimali eziluhlaza eziluhlaza - nxazonke ngemuva kokuzungeza kungekho ukugijimela. Akukho okunye okubandakanya konke kunezifundo zegalofu ezenzelwe uGreg Norman.
Ngokuya ngezindawo zokuhlala, akukho lutho olujwayelekile ngamaSandals suites, enikeza ama-suites amaningi angaphezulu phezulu njengama-Skypool Suites, ama-Swim-Up Suites, ama-Millionaire Suites, ama-Rondoval Suites nxazonke, ama-Over-the-Water Villas, kanye Ama-Bungalows angaphezu kwamanzi. Futhi kuphela amaSandals afaka abapheki bomuntu siqu esidlekeni sabo sothando iButler Suites.
Bonke utshwala be-premium bufakiwe ngaso sonke isikhathi - asikho isidingo sokulinda ihora elilodwa elijabulisayo losuku. Kunemigoqo efinyelela ku-11 endaweni ngayinye yokungabi namathebhu futhi akukho mingcele. KwaSandals, izivakashi zingajabulela ukuthululwa okungenamkhawulo kwewayini likaRobert Mondavi Twin Oaks.
Thokozela ukudla kwakho!
Ukudla okukhethekile kumaSandals, futhi, kukhethekile. Izimbadada zifaka okungenamkhawulo noma nini lapho kudliwa khona izinkanyezi eziyisihlanu emhlabeni wonke ezindaweni zokudlela ezikhethekile ezifika kwezili-5 ngokuvakasha ngakunye. Indawo yokudlela ngayinye ifaka umpheki osezingeni lomhlaba esebenzisa izithako ezintsha zasemapulazini nezetafula.
Wonke amaphakethe we-Sandals afaka wonke amaholide afaka:
DLA + PUZA
I-5-star gourmet dining kuze kube ngu-16 zokudla ngokuvakasha ngakunye
Ukudla kwasekuseni, isidlo sasemini, isidlo sakusihlwa kanye nokudla okulula noma kunini
Unlimited utshwala bama-premium
Kuze kube nemigoqo engu-11 ngokuvakasha ngakunye
Amabha athengisiwe kuwo wonke amagumbi
URobert Mondavi Twin Oaks ongenamkhawulo® amawayini
Kuqinisekiswe i-PADI ukuntweza emanzini (nayo yonke imishini)
Uhambo lwe-Snorkeling (nayo yonke imishini)
Amakati eHobie, amabhodi okugwedla, ama-kayak
Imfundo yobungcweti yezemidlalo yamanzi
Private iziqhingi ezingasogwini eSandals Royal Caribbean naseSandals Royal Bahamian
Imali eluhlaza ku igalofu izifundo ezindaweni zokungcebeleka ezikhethiwe
Ibhola volleyball, basketball, amatafula echibini
I-tennis imini nobusuku
Isikhungo sokufaneleka ngemishini yobuchwepheshe besimanje
Usuku nobusuku ukuzijabulisa kufaka phakathi imibukiso ebukhoma
Kuthunyelwe ngemoto ezemidlalo zamanzi ezindaweni zokungcebeleka ezikhethiwe
Exclusive Shintsha Amalungelo phakathi kwezindawo zokungcebeleka
Zonke izeluleko, izintela nezipho
Ukudluliswa kwesikhumulo sezindiza iRoundtrip
Indawo Yokungena Yesikhumulo Sezindiza Ekhethekile eJamaica naseSaint Lucia
Zonke izindawo zokubhuka zezimbadada zingabantu abadala kuphela, ezenzelwe imibhangqwana esothandweni
I-WiFi yamahhala (egumbini nakuzo zonke izindawo ezivamile)
Umshado wamahhala (ukuhlala ubusuku obungu-3 noma ngaphezulu)
Personal Isevisi yabaphathi nokudluliswa kwangasese kuma-suites amaningi aphezulu